Maqaayado laga cuno cuntada Europe oo laga furay Muqdisho iyo xeebta Jazeera (Sawiro)
Updated About:379 days ago 0
Iyadoo ay kusoo badanayaan magaalada Muqdisho dadka qurba joogta ah ee fursadaha shaqo ka abuuraya caasimada ayaa waxaa baararka The Village ee degmada Hodan iyo xeebta Jaziira lagu tilmaamay kuwa ugu cuntada macaan xiligaan.
Baaarka The Village wuxuu ku yaalaa xaafada Zoona Key degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho waxaana aas aasay wiil dhalinyara ah oo ka yimid magaalada London kaasi oo haatan ka mid ah dadka ugu caansan Muqdisho.
Axmed Jaamac waxa uu kusoo kordhiyey magaalada Muqdisho nooc ka mid ah baararka casriga ah ee laga cuno raashinka loo diyaariyey habka Yurub oo kale, waxaana uu qeyb ka qaadanayaa dib u dhiska magaalada iyo soo dhaweynta dadka ka yimaada qurbaha iyo kuwa ajnabiga ah.
Wuxuu sameeyey maqaayado sadex ah, mid tan aan soo sheegnay tan labaad waxay ku taalaa kasoo horjeedka Tiyaatarka, tan ugu caansana waa maqaayada ku taala xeebta Jaziira.
Maqaayada Jaziira waxa ay shaqeysaa halka maalin ee Jimcaha waxaana wax ka cuna dhalinyarada qubrbaha ka timaado, ajaanibta oo u badan Turkida, Carabta iyo kuwa kale ee shaqaalaha gargaarka, waxaa kale oo taga lamaanayaasha iyo ganacsatada iyo sidoo kale saxafiyiinta.
Amaanka Jaziira waxaa sugaya ciidamo ka tirsan kuwa dowlada iyadoo meel aanan ka fogeyna uu ku yaalo saldhiga weyn oo ay leedahay AMISOM.
Noocyada cunooyinka lagu sameeyo maqaaydaha The Village waxay isugu jiraan kallun noocyo kala duwan leh oo uu ugu caansanyahay lobster, hilb la habeeyey, iyo Pasta.
Ahmed oo la weydiiyey qiimaha uu gado ayaa ku jawaabay in uu ugu qaalisanyahay kaluunka oo ah buu yiri saxankii $20, waxaa ku xiga hilibka steak-ga $7 iyo baastada oo 3 doolar ah sidaasi daraadeed Soomaalida caadiga ah ma tagi karto oo waxa wax ka cunaa waa ajaanibta qurba jooga iyo dadka kale ee dhaqaalaha leh.
Axmed wuxuu leeyahay waxaan isku dayey in aan fursadaan oo kale ka abuuro Jabuuti, Kenya iyo meelo kale laakin waxa igaga wanaagsanaatay ayuu dhahay magaalada Muqdisho.
Haatan waxaa ka shaqeeya maqaayadahiisa shaqaala badan oo uu tababaray hab karinta kuwaasi oo iyana shaqo ka helay.
Si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho waxaa kusoo batay dadka ka yimaada qurbaha, kuwaasi oo isugu jira qaar soo dagay oo soo laabtay iyo kuwo dalxiis iyo indha indheyn u yimaada.
Waxaase uu shaki ku jirin hadii Soomaalida qurbaha ay maalgashaan dalka in ay wax weyn kusoo kordhin doonaan iyaguna ay faa’iidi doonaan sida ay qabaan dadka bartay arrimaha dhaqaalaha.